Isipele seWindows Esingeke Siyiqale phansi | Izindaba zamagajethi
Isizathu sokuthi ikhompyutha ye-Windows ingaqali kabusha ngokujwayelekile kungenzeka ukuthi yicomputer ungenwe yifayela lekhodi elibi, okuvimbela ukuthi uhlelo lokusebenza lusebenze kahle.
Ngaphansi kwezimo ezinjalo kunezindlela ezimbalwa esingazisebenzisa lapho sizama buyisela i- "boot" yeWindows, noma ngabe lokhu kungenzeki ukukusebenzisa kahle, kuzofanele sizame ukuthola imininingwane ebaluleke kakhulu ngamaqhinga ambalwa esizowasho ngezansi.
1 Izinyathelo zokuqala zokuzama ukuthola i-Windows boot
2 Usebenzisa i-Windows 7 yokufaka idiski
Izinyathelo zokuqala zokuzama ukuthola i-Windows boot
Kunenani elikhulu lezinye izindlela esingazisebenzisa, lapho sizama buyisela le boot yeWindowsNgalokhu, kunamathuluzi amaningi ngesitayela se- "Live CDs" angasisiza kulo msebenzi. Ukwenza lokhu, kuzofanele uye kuphela kusayithi lapho wonke la madiski abhalwe khona bese ukhetha ithuluzi elifanele. Ngalokhu kuzodingeka qala kabusha ikhompyutha ngemidiya efakiwe futhi ngemuva kwalokho, zama ukuqeda noma yiliphi igciwane noma ifayela lekhodi enonya evimbela ukusebenza okujwayelekile noma ukuqala kabusha kweWindows.
Uma lokhu kungasebenzi, kunethuba lokususa i-hard disk kwikhompyutha bese uyibeka njengesibili (isigqila) kwenye ikhompyutha. Ukusuka lapho sizoba nethuba lokuthola lonke ulwazi noma okungenani okubaluleke kakhulu kulo. Yize lokhu kungenye indlela enhle kakhulu engasinikeza imiphumela emihle, kodwa yonke inqubo yokuncishiswa kwekhompyutha ingacasula futhi ibe yingozi uma singakwenzi ngendlela eyiyo. Ngalesi sizathu, ngezansi sizophakamisa ezimbalwa amaqhinga ongawasebenzisa kusuka kukhompyutha efanayo ukubuyisa imininingwane ebaluleke kakhulu kunethiwekhi yangaphandle.
Usebenzisa i-Windows 7 yokufaka idiski
Senze ireferensi kuWindows 7 yize, le ndlela ingasebenza nakwezinye izinhlelo zokusebenza. Uma ungenayo i-Windows 7 disk disk, ungasebenzisa ithuluzi lokusekela, okungukuthi, "i-disk yokutakula" yayo. Uma ucabanga ukuthi unayo idiski lokufaka uhlelo lokusebenza, siphakamisa ukuthi ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo.
Faka i-disc yakho yokufaka iWindows 7 kwikhompyutha yakho.
Vula ikhompyutha bese ulinda ukuthi umyalezo uvele usebenzise idiski njengendlela yokuqala uhlelo lokusebenza.
Kufanele ulandele iwizard ngendlela ejwayelekile, kepha kuze kube iwindi lapho kuphakanyiswa khona «imishini yokulungisa".
Ngaleso sikhathi kufanele ukhethe le nketho, lapho uzokweqa khona ngefasitela elifana kakhulu nalokhu okulandelayo.
Ukusuka kokufanayo kuzofanele ukhethe inketho yokugcina, ezokusiza ukuvula iwindi lokugcina lomyalo.
Uma sekuvuliwe kufanele ubhale «inothi»Njengoba isithombe esizosibeka kamuva siphakamisa.
Njengoba kungakholakali njengoba kubonakala kungaka, le yingxenye ethakazelisa kakhulu yamaqhinga esesishilo ngawo kuze kube manje thola imininingwane ebaluleke kakhulu kusuka ku-Windows 7. Ngemuva kokucindezela i- «entrar»Izovula i-«imemo pad»IWindows, lapho kufanele ulingise khona, ukuthi uzovula idokhumenti entsha.
Ngokushesha umhloli wefayela uzovula, kufanele akhethe engxenyeni yokugcina aye ku- «Wonke amafomethi«. Ngalokhu uzoba nethuba lokubona wonke amafayela kunoma iyiphi ifolda eyingxenye yamadrayivu alukhuni ekhompyutha yakho.
Leli windi uza ukwenza njengomhloli wefayela ojwayelekile, isizathu sokuthi ngaphandle kwenkinga kuzodingeka sifake i-USB pendrive noma i-hard drive yethu yangaphandle.
Izokwaziwa ngokushesha, bese kufanele iqale ukuzulazula iye endaweni kwi-hard drive yangakini, kuze kube thola amafayela nolwazi kwenze kubaluleke kakhulu ukubuyisela.
Ku-skrini yangaphambilini siphakamise isibonelo esincane nokuthi kuphi, sinqume khetha bese ukopisha kufolda ye-Hewlett-Packard.
Kamuva kuzofanele sikhethe kuphela «Computer»Ngakwesobunxele bese uya endaweni ku-USB stick yethu, ukuze unamathisele esikukopishe ngaphambilini.
Ngaphandle kokungabaza, lokhu kungenye yamaqhinga afihlwe kakhulu yiMicrosoft, yize bekuyindaba nje yokuhlaziywa okuncane kwalokho esingakwenza nganoma yisiphi isikhathi ngamathuluzi afanele. Ngale ndlela futhi uma ngesikhathi esithile ikhompyutha yakho ye-Windows 7 ngeke iqale kabusha futhi uphoqeleka ukufometha i-hard drive ukwenza ukufakwa kabusha okuphelele, siphakamisa ukuthi ulandele le ndlela ngamasu aphakanyisiwe ukuze ukwazi ukuthola okungenani imininingwane ebaluleke kakhulu kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungayilondoloza kanjani iWindows lapho ingeke iqale kabusha
Kungani ukukhanya kwesibonisi seKhompyutha kufika ku-Windows?